तपाईको आज सोमबारको राशिफल भन्छ– आज यी ६ राशिकालाई हुनेछ विशेष फाइदा ! « Sansar News
तपाईको आज सोमबारको राशिफल भन्छ– आज यी ६ राशिकालाई हुनेछ विशेष फाइदा !
१ कार्तिक २०७८, सोमबार ०७:२०
ब्चष्भकखर्च लागे पनि काम बन्नेछ। पछिका लागि केही वस्तु त्याग्नुपर्ला। दोहोर्याएर प्रयत्न गर्दा रोकिएको कामसमेत बन्न सक्छ। आवश्यक पर्दा सरसापट वा कर्जामार्फत धन जुटाउन सकिनेछ। भेटघाटका लागि समय अनुकूल नदेखिए पनि टाढाका साथीभाइले काममा साथ दिनेछन्। अर्थसञ्चय नहुन सक्छ। समयमा आलस्य गर्ने बानीले पछि परिनेछ। लगानी बढाउने अवसर प्राप्त हुनेछ।
त्बगचगकमिहिनेतको राम्रो परिणाम प्राप्त हुनेछ। तारिफयोग्य काम सम्पादन गर्दै मनग्य धन आर्जन गर्न पनि सकिनेछ। प्रतीक्षित नतिजाले उत्साह जगाउनेछ। थोरै लगानीबाट पनि नाफा उठाउन सकिनेछ। विभिन्न भौतिक साधन जुट्नेछन् भने दिगो फाइदा हुने काम प्रारम्भ गर्ने समय छ। आम्दानीका नयाँ स्रोत फेला पर्नेछन्। पहिलेको सफलताले नयाँ अवसर पनि दिलाउन सक्छ।
समय संघर्षपूर्ण रहनेछ। हठ गर्ने बानीले दुःख पाइनेछ। परिस्थितिसँग केही सम्झौता गर्नुपर्ला। तापनि लक्ष्यमा पुग्न निकै मेहनत पर्नेछ। ईर्ष्याभाव राख्नेहरूले दुःख दिनेछन्, वादविवादबाट टाढा रहनुहोला।अधिकार र प्रतिष्ठा जोगाउन सफल भइनेछ। भौतिक साधन जुट्नाले दिगो फाइदा हुने काम प्रारम्भ हुन सक्छ। यात्रा खर्चिलो हुनेछ। प्रतिस्पर्धीसँगको सम्झौता टुंगिन सक्छ।
२०७८ कार्तिक १ गते, सोमवार, (१८ अक्टोबर २०२१)
तपाईको आज आइतवारको राशिफल, हेर्नुहोस् आज क–कसलाई छ त फाइदा ?
तपाईको आज शुक्रवारको राशिफल भन्छ-आज यी पाँच राशिकाले…
आज बिहीवार, राशिफल हेरेर गर्नुहोस् तपाईको आजको दिनको…
तपाईको आज बुधवारको राशिफल, हेर्नुहोस् आज क-कसलाई छ…
तपाईको आज मंगलबारको राशिफल भन्छ-आज यी पाँच राशिकाले…